Marka la sii daayo macruufka 13, miyaan cusbooneysiiyaa ama ka soo ceshadaa xoq? | Wararka IPhone
Marka la sii daayo macruufka 13, miyaan cusbooneysiiyaa ama ka soo ceshadaa xoq?
Sannad kasta Apple ayaa soo saarta nooc cusub oo ah iOS, macOS, tvOS, iyo watchOS. IPhone-ka, sida Mac, waa aalado inta ugu badan ku xanuunsan kara dareenkan, tan iyo sanadkii oo dhan, waxaan rakibnaa oo tirtirnaa tiro badan oo codsiyo ah.
Nasiib darrose, markaan tirtirno codsiyada aanan xiiseyneyn, waxaa had iyo jeer ku haray faylal ku jira qalabkeenna. Faylashaas, goor dhow ama ka dib ayaa laga yaabaa inay isku dhacaan barnaamijyada kale iyo iPhone ama Mac, keena cillad qalabkeenna.
1 Cusboonaysii ama soo celi, keydadkii ugu horreeyay
2 U cusbooneysii iOS 13
3 Ku rakib iOS 13 ka soo xoqida
4 Ha soo celin kaydinta
4.1 Ka soo saar sawirada iyo fiidiyowyada iPhone-ka Windows
4.2 Ka soo saar iPhone Sawirrada iyo Fiidiyowyada Mac
5 Nuqul sawirada iyo fiidiyowga iPhone-ka
Cusboonaysii ama soo celi, keydadkii ugu horreeyay
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno ka hor inta aan cusbooneysiin qalab kasta oo ku saabsan nooc cusub oo ka mid ah nidaamkeeda hawlgalka waa inaan sameyno nuqul nuqul ah 99% waqtiga, hawshu badanaa ma dhacdo, laakiin marwalba waxaa jira 1%.
Haddii aan helno nasiib-darro in qalabkeennu uusan si sax ah u dhammayn hawsha rakibaadda, laalaado ama galo wareegyada dib-u-soo-celinta aan dhammaadka lahayn, waxaa nalagu qasbi doonaa inaan dib uga soo ceshanno aaladdeenna xoqid, sidaa darteed waxaan waayi doonnaa dhammaan macluumaadka aan kaydsannay gudaha.
Haddii aan qaadnay taxaddar sameynta gurmad ama aan iCloud u hawlgelinnay dhammaan sawiradeenna iyo fiidiyowyadeenna (taas oo aakhirka had iyo jeer ah waxa ugu muhiimsan) dhib ma leh. Laakiin haddii kale, waa inaan ogaanno taas ma jirto wado lagu soo helo waxyaabahaas oo dhan, inkastoo xaqiiqda ah in codsiyada qaarkood ay sheeganayaan inay awoodaan inay sidaas sameeyaan.
U cusbooneysii iOS 13
Si toos ah u cusbooneysiinta qalabkeena ilaa iOS 13 waa habka ugu dhakhsaha badan Si aad ugu raaxeysato mid kasta oo ka mid ah wararka ka imanaya noocyadan cusub ee iOS 13, maaddaama ay tahay inaan kaliya ku xirno iPhone-keena ama iPad-ka xeedho oo aan kala soo baxno oo si toos ah qalabka uga soo dejino.
Nidaam aad u dhakhso badan.
Ma aha inaan dib u cusbooneysiino codsiyada.
Ma jiro qaabeyn qalab.
Waxqabadka qalabka ayaa saameyn kara.
Degganaanshaha codsiyada qaarkood waxay noqon kartaa dhibaato.
Faylasha qashinka ah ee dhammaan codsiyada iyo ciyaaraha aan horey u rakibnay oo aan tirtirnay waa la hayaa.
Ku rakib iOS 13 ka soo xoqida
Laga soo bilaabo Actualidad iPhone, waxaan had iyo jeer kugula talineynaa rakibi noocyo cusub oo macruufka ah oo ka soo xoq in Apple ay soo saarto sanad walba, sidaa darteed waxaan iska ilaalinaa inaan jiidayo dhibaatooyinka hawlgalka ee suurtagalka ah ee aan yeelan karno sidaas awgeedna aan uga fogaanno dhibaatooyinka, maadaama aan aragno jiidaya faylasha dalabka ee aan ku sii jirin qalabkeenna.
Ma jiraan wax qabad ama xasillooni, wixii ka baxsan barnaamijyada aan ku habboonayn iOS 13.
Waxaan baabi'ineynaa dhammaan feylasha qashinka ah ee barnaamijyada aan rakibnay, waan tirtirnay ama haddaanan isticmaalin.
Dib ugu soo celi dhammaan codsiyada oo waa inaad iyaga u qaabeysaa.
Waa geedi socod gaabis ah waxayna qaadataa waqti ka badan inta si toos ah loo cusbooneysiinayo ee iOS 13.
Inta lagu jiro maalmaha ugu horreeya, qalabka ayaa laga yaabaa inuu muujiyo batteriga ama dhibaatooyinka waxqabadka, illaa dhammaan howlaha maaraynta gudaha ay caadi noqdaan.
Ha soo celin kaydinta
Dib-u-habeynta ayaa noo oggolaaneysa inaan ku soo celino aaladda isla xaaladdii ay ku jirtay ka hor inta aysan shaqada joojin. Keydadka ay iTunes iyo iCloud ka sameeyaan aaladahayaga ku dar dhammaan waxyaabahaaga. Sidan oo kale, adigoon dib u soo celin qalabkeenna, waxay ina tusi doontaa dhammaan macluumaadka iyo waxyaabaha laga heli doono qalabka markii aan sameynay kaydinta.
Haddii aan ugu dambeyntii dooranay inaan sameyno eber rakibid ah iOS 13, waa inaanan dib u soo celin keydka, tan iyo waxaan jiidi lahayn dhibaatooyinka oo dhan, hadda iyo mustaqbalka, oo aan ku haysannay iOS 12.
Apple ayaa na siisa 5 GB oo ah meel lagu keydiyo bilaash ah, oo aan ku sameyn karno nuqul nuqul ah ajandayaasheena, xiriirada, qoraalada, xogta caafimaadka, xusuusinta, calaamadaha Safari, furaha sirta iyo waxyar oo kale. Haddii aan dooneyno inaan nuqul ka sameysanno sawirradeena iyo fiidiyowyadeenna, waa inaan tagnaa goobta wax lagu baaro oo aan kireysano meel lagu keydiyo.
Haddii aan ku hayno meel kayd ah oo ku taal iCloud, dhammaan waxyaabaha ku jira qalabkeennu waxay ku jiri doonaan daruuraha Apple, sidaas looma baahna in la sameeyo keyd, illaa iyo inta dhammaan codsiyada aan isticmaalno ay la jaan qaadayaan iCloud si ay u keydiyaan faylashaada. Markaan rakibno macruufka 13, dhammaan waxyaabaha si toos ah ayaa loogula soo bixi doonaa bartayada.
Haddii aad isticmaasho 5 GB ee Apple ku siiso bilaash si aad ugu kaydiso xogta aan ku sheegay sadarka hore oo aad rabto dib u soo celi qalabkaaga xoq adigoon waayin sawirro iyo fiidiyowyo, waa inaad koobi ka sameysaa ka hor intaadan soo celin.
Ka soo saar sawirada iyo fiidiyowyada iPhone-ka Windows
Si loo helo sawirada iyo fiidiyowyada aan ku keydinay iPhone-keena, waa inaan haysannaa nooc ka mid ah iTunes-ka la rakibay, maahan inuu noqdo kan ugu dambeeya, maadaama aynaan adeegsan doonin.
Waxaan ku xireynaa iPhone-keena PC-ga waxaana sugeynaa qeyb cusub oo ka soo muuqan doonta kooxdeena.
Adiga oo gujinaya taas cutub cusub, waxaan kaliya marin doonaa sawirada iyo fiidiyowyada ku keydsan qalabkeena.
Kaliya waa inaan ku dhex marnaa galka kala duwan ilaa hel nuxurka aan dooneyno inaan soo saarno.
Ka soo saar iPhone Sawirrada iyo Fiidiyowyada Mac
Waxaan ku xireynaa iPhone-ka Mac.
Waxaan fureynaa Launcher Codsiyada, waxaan fureynaa faylka Kuwa kale oo guji Screenshot.
Markaas way tusi doontaa dhammaan waxyaabaha ku saabsan maqalka in aan ku hayno muunaddeena gaarka ah.
Si loo soo saaro, waa inaan doorannaa dhammaan waxyaabaha ku jira iyo ku jiido galka meesha aan rabno inaan ku keydinno.
Haddii aad wax shaki ah ka qabtid inaad raacdo mid ka mid ah tallaabooyinka aan ku muujiyey qodobkan, ha ka waaban inaad i weydiiso faallooyinka. Waxaan sidoo kale kugu casuumayaa inaad ka tagto faallooyinka shakiga laga yaabo inaad leedahay oo aan lagu xallin qodobka.
Nuqul sawirada iyo fiidiyowga iPhone-ka
Markaad nuqul ka samaysato dhammaan sawirada iyo fiidiyowyada aan ku haysannay qalabkeenna oo aan cusboonaysiinnay iOS 13, waa waqtigii nuqul dhammaan sawiradaas iyo fiidiyowyadaas dib ugu soo celi iPhone-keena, illaa iyo inta aan dooneyno inay iyaga markasta gacanta ku hayaan.
Habka loo sameeyo waa mid aad u fudud oo wuxuu u baahan yahay kombiyuutar leh iTunes Si taas loo sameeyo, kombiyuutarka ay ku yaalliin sawirada iyo fiidiyowyada aan dooneyno inaan nuqul ka sameysano.
Marka xigta, waxaan ku xireynaa iPhone-keena ama iPad-ka kumbuyuutarka, waxaan fureynaa iTunes-ka waxaanan dooranaynaa astaanta qalabka lagu soo bandhigay barnaamijka.
Khaanadda midig, guji Sawirrada. Waxaan calaamadeyneynaa sanduuqa Sawir isku xir oo ka dooro galka meesha aan dooneyno in aan ku sawiro sawirada iPhone-ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 13 » Marka la sii daayo macruufka 13, miyaan cusbooneysiiyaa ama ka soo ceshadaa xoq?
Ma ka cusbooneysiin kartaa 0 oo ma waayi kartid xogta caafimaadka?
Xogta caafimaadka waxaa lagu kaydiyaa iCloud, oo ay weheliyaan xiriirada, kalandarka, iyo inbadan. Markaad rakibto xoqida, oo aad dhaqaajiso iCloud, xogtaas si toos ah ayaa loo soo dejiyaa. Dhib malahan haddii aad leedahay 5 Gb bilaash ah oo ka badan 2 TB.
Waayahay, Aad baad ugu mahadsantahay jawaabtaada.
Marka haddii aan cusbooneysiiyo oo aan dhigo nuqulka la keydsaday ee iCloud sidoo kale waan soo dejisan karaa khaladaadka ku xusan qodobkan iyo faylasha dalabka ee aan ku sii jirin qalabka.
Iyo markii la cusbooneysiinayo oo dib loo soo celinayo sida iPhone cusub oo aan u dhigayo aqoonsikeyga Apple-ga ah iyada oo aan la dhigin nuqul iCloud ah, xiriiriyaasha, jadwalka iyo caafimaadka ma helaan? Waxa aan ugu jeclaan lahaa.
Sax Kaabta waa hal shay, iCloud ama iTunes. Iyo wax kale oo ah xogta lagu kaydiyo daruuraha si madaxbanaan.
Gudaha goobaha iCloud, waad dhaqaajinkartaa ama barkinta kartaa xogta aad rabto inaad keydiso (jadwalka, caafimaadka, howlaha, xiriirada ...). Hubso inaad hubisay sanduuqa Caafimaadka.
Ok mahadsanid markale,
Ugu dambayntiina markaa dib u soo ceshan sidii iPhone cusub oo aad u dhigto idkeyga 'Apple id' iyada oo aan la dhigin nuqulkii iCloud, miyaad heshaa xiriirada, kalandarka iyo caafimaadka?
Xogta la xiriirta aqoonsigaas waa la soo dejinayaa. Laakiin waa inaad dhaqaajisaa iCloud iyaga si ay u soo dejistaan. Waxay u shaqeysaa asal ahaan, laakiin waligeed ma xuma in la hubiyo.
IOS 13 hadda waa loo heli karaa dhammaan isticmaaleyaasha
Cusbooneysiinta Shazam oo leh qaab mugdi ah iyo xulashooyinka heeso cusub